Uzunçayır – RayHaber | raillynews
Uzunçayır IETT Aagga Adeega ee Ku Qornaa
Uzun Istanbulayır IETT Aagga Peron waxaa loo adeegay: Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay adeegsiisay Degmooyinka Uzunçayır Peron ee ku dhaw metrooga iyo dhisme-ka isku xidha sababta oo ah qaban-qaabada ka shaqaysa fagaaraha Kadıköy. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM), Istanbul [More ...]
Isku darida waxoogaa ayaa gashay wadada Metrobus
Isku-darka la taaban karo ayaa soo galay jidka Metrobus: Isku-darka la taaban karo wuxuu galay wadada Metrobus wadada jihada Uzunçayır ee Fikirtepe, Istanbul. Ma jiro qof la dilay ama dhaawacmay. Xakameynta gaariga wadaha la taaban karo ee taraafikada ee jihada Uzunçayır ee Istanbul fiidkii [More ...]
Dad badan oo ku nool xeryaha Uzunçayır ayaa joojiya
Dad aad u tiro badan oo ku sugnaa wadadda metrobus-ka Uzunçayır: Joogtada Metrobus ee Uzunçayır wuxuu joogaa heer aan dhici doonin haddii subaxda la tuuro. Subaxnimadii iyo shaqadii uu iskuulka uga aadi lahaa gurigiisa oo ku yaal Istanbul, Uzunçayır wuu yaabay markii ay arkeen dadkii badnaa. [More ...]
Shilkii Metrobus ayaa mar kale curyaanka marayay
Shilalka gawaarida 'Metrobus' ayaa mar kale curyaamiyey taraafikada: Söğütlüçeşme-Avcılar metrobus oo ku ordaya khadka halka gadaal gadaal ka boodey. Marka hore, giraangiraha wuxuu jebiyey muraayadda hore ee metrobus wuxuuna dhaawacay gaariga 100 ee wadada weyn ee D-4. Safka wakhtiga qadada ee 10.30 [More ...]
Dadka naafada ah ma heli karaan metrobus
Dadka naafada ah ma heli karaan metrobus-ka: Shaqada ayaa socota si loogu qaabeeyo qaabeynta istaroogga 'Metrobus' ee loogu talagalay dadka naafada ah. Si kastaba ha noqotee, soo gaabinta joogsiyada waxay siisaa dadka naafada ah waqti adag. Marka loo eego macluumaadka ay bixiyeen Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) [More ...]
Furitaanka madaarka Kadikoy-Kartal waa 19. sugaya muwaadiniinta maalinta
Waa suurtagal in la helo meel lagu fadhiisto inta u dhaxaysa 32 km, xarunta 22 iyo xitaa inta xoogga u aadeysa subaxnimada, taas oo yareynaysa masaafada u dhaxaysa Kadıköy iyo Kartal illaa daqiiqadaha 16. Marka loo barbar dhigo metroga Yurub ee xirtay [More ...]